Woosta kro ɛne Massachusetts mfinfini donkuo a ɔhwɛ apɔwmuden soɔ, ɛne Massachusetts sukuu pon a ɔsua apɔwmuden ho nsɛm soɔ aka abɔ mu reyɛ abisa bisa afa nipa a ɔte Woosta mpasuaso ha. Botaeɛ a ɛtae abisa bisa yi akyi ne sɛ, wɔn pɛ sɛ wɔ sua biribi ɛfa mframa ne nsanee-yareɛ coronavirus a yɛ san frɛ no covid-19 ho, na ɔhunu sɛnea ne nsunsuansobɔ teɛ ɛwɔ Woosta kuroma soɔ.
Saa kaseɛbɔ yi bɛ boa pii:
Mpɔwmuden asoɔƐyɛsofoɔ ɛne akuokuo a ɔhwɛ mantamuu nipa soɔ ɛwɔ nteaseɛ a ɛfa nea nipa rekɔ mu ɛne nea nipa a ɔwɔ mpasuaso nyinaa hia.
Mpɔwmuden ayarehwɛfoɔ ɛne mantamuu mpaninfoɔ a ɔhwɛ nipa ho dwumadie yi ɛde nnoɔma regugu akwan mu, na w'asi gyina sɛ ɔbɛ boa nipa a ɔwɔ mpotamuu ha.
Mantamuu mpɔwmuden nhwehwɛmufoɔ ahunu na wɔn ate nea mantamuufoɔ rekɔ mu. Wɔ de wɔn nhwehwɛmu no bɛkyerɛ mpasuaso ne akuokuo bi te sɛ nhwehwɛmufoɔ ɛne aban mpaninfoɔ.
Yɛ de nhwehwɛmu yi bi nso bɛ brɛ wo!
Saa abisabisa yi wɔ nkyekyɛmu mmienu:
Nea ɛdi kan no bisa nsɛmfua bi te sɛ mframa-yadeɛ covid-19 ho nsunsuansobɔ ne ne nhwehwɛmu. Mpo sɛ nyaa nsunsuanso biara a, wo anoyie hia yɛn paa ara.
Nea ɛtɔ so mmienu nso bisa nsɛmfua fa sɛnea mframa-yadeɛ covid-19 yi asankae wo asetena mu, nnoɔma bi te sɛ w'adwumayɔ mu ne wo adwendwene apɔwmuden ho.
Saa mmisabisa yi, nea ɛnyɛ nie:
Wo apɔwmuden so hwɛ, ɛne Ɛho adeyɛ.
Mframa-yadeɛ COVID-19 ho nhwehwɛmu ɛne apɔwmuden ho nsɛnsɛm a ɛka ho.
Sɛ wo refua saa nsɛmbisa yi ano a, nkyerɛ sɛ wo bɛ nya biribi anaa mmoa afiri yɛn hɔ.
Nsɛm a wo ne yɛn bɛkyɛ no, yɛ bɛ bɔ no tɔfa aka nsɛmfua ahorow a yɛ bɛ nya afiri afofro nso hɔ. Na ɛmom, wɔn din ne neɛ ɛbɛ yi wɔn to adi deɛ, yɛn mfa nka nsɛmbisa tɔfa ne ho bi.
Yɛ hyɛ nipakuo a ɔwɔ Woosta mpotamuu bi sɛ Grafton, Holden, Lɛsta, Milbɛri, Shrewsbɛri, Boylston Atɔeɛ, nkuran sɛ wɔn mmoa yɛn na wɔn nyi saa nsɛmfua yi ano. Wo nsuahunu ɛhia paa!
Sɛ wo mia ɛha yi a, ɛkyerɛ sɛ wo pene so sɛ yɛ de wo nsɛm no bɛka ho.
Kyerɛ sɛ nea wo ho teɛ ɛnɛ.
Me ho dodo me
Me te apɔ paa
Sɛ wo yare saa yaredɔm yi bi a, GYAE na firi saa afidie yi so na frɛ 911 wɔ ahomatrofoso.
Wo koko tae yɛ wo ya
Wo homee mo yɛ den
Anisobirieɛ anaa ɛtire a ɛmu yɛ wo hare
Wo kasa a ayɛ naa
Wo ntumi nsɔre mfiri mpa so